Lozam-pifamoivoizana :: Nirehitra ny fiara roa nifandona • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Nirehitra ny fiara roa nifandona
Nifandona ny fiara taksiborosy marika « Mazda » sy ny fiara iray marika « Peugeot 504 », tany amin’ny lalam-pirenena faha-34, tany Betafo, afak’omaly antoandro. Niteraka firehetana ny fifandonana ka samy may ny fiara roa. Kila tanteraka ilay « Peugeot 504 ». Ny lohan’ny taksiborosy kosa no nisedra fahasimbana. Nieren-doza ny mpamily sy ny olona tao anatin’ireo fiara roa ireo.
Tapaka hisatra iry fiara marika « Mazda » nandeha tamin’ny fidinana rehefa hiditra ny tanànan’i Betafo, teo amin’ny toerana antsoina hoe Ambohijatovo. Nifatratra tamin’ny fiara iray hafa marika « Peugeot 504 » nifanena taminy izy.
« Nitondra voasary sy olona vitsivitsy ilay Mazda. Nihemotra ny fiara voadonany ary niredareda ny afo, avy eo. Tafavoaka haingana ny olona tao anatin’ ireo fiara ireo. Saika niitaran’ny afo kosa ny trano teo an-tsisindalana », hoy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.
Ny fokonolona no namono ny afo. Tsy nanohy ny fanadihadiana ny polisy noho ny tsy fisiana fahavoazan’olona, afa-tsy ny fahasimbana fitaovana ihany.
Famongorana halatr’omby :: Miaramila roa arivo lahy handeha hiady amin’ny dahalo
Disadisan-tokantrano :: Vehivavy voatondro ho nandoro ny tranon’ny vadiny